Samsung dia mampihetsika ny ECG ao amin'ny Galaxy Watch 3 sy Watch Active 2 | Androidsis
Apple dia nanolotra ny ECG tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny Apple Watch Series 4 roa taona lasa izay, fisehoan-javatra iray ahafahan'ny mpampiasa maro manamarina fa mijaly amin'ny aretim-po izay tsy fantatr'izy ireo teo aloha. Ahoana ny fiasan'ity fampiasa ity dia voaporofo fa tena marina Mampiasa azy io ho toy ny teaseran'ny dokambarotra i Apple.
Ity fampiasa ity, tsy natokana ho an'ny Apple WatchNa izany aza, izy no nampalaza azy. Raha ny marina, Samsung dia manolotra an'io asa io ihany koa na dia tsy mbola misy aza izy io amin'ny Galaxy Watch 3 sy ny Galaxy Active 2, roa amin'ireo maodely farany indrindra natombony teo amin'ny tsena.
Nandritra ny ora vitsivitsy dia nanomboka ny orinasa Koreana Samsung mampihetsika ny fampiasa ECG, ny fiasa mamela antsika hanao electrocardiogram amin'ny tanantsika mba hanamarina raha misy famantarana izay manondro fa mijaly amin'ny fibrillation atrial isika, valiny izay tsy voafaritra, fa manondro kosa fa tsy maintsy mandeha any amin'ny dokotera faran'izay haingana isika mba hampifanoherana ny valiny.
Amin'izao fotoana izao io fampiasa io any Etazonia sy Canada ihany no misy rehefa nahazo fankatoavana avy amin'ny FDA, ary koa Korea Korea. Raharaha herinandro maro vao mahazo fankatoavana avy amin'ny Vondrona Eropeana ny orinasa Koreana mba hahafahany manolotra io asa io any Eropa.
Noho io fiasa io, ireo mpampiasa rehetra izay miahiahy momba ny fahasalamany ary nanana fikasana hividy smartwatch nefa tsy nanapa-kevitra. Tsy afa-miala tsiny izy ireo izao.
Ahoana ny fomba fiasany amin'ny ECG amin'ny Galaxy Watch 3 / Active 2
Raha te hahalala raha misy tsy fetezan'ny fontsika miasa, dia tsy maintsy atao izany apetraho amin'ny fisaka ny sandry ary apetraho eo amin'ny bokotra ambony ny rantsan-tànanao mandritra ny fotoana fohy. Raha tsy ara-dalàna ny gadona am-po dia hahazo fampandrenesana manasa antsika hanatona dokotera izahay, izay azonay aseho ny valim-panadinana, valiny izay voatahiry ao amin'ny application Samsung Health.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia mampihetsika ny ECG ao amin'ny Galaxy Watch 3 sy Watch Active 2
[APK] VLC dia havaozina amin'ny interface maoderina kokoa amin'ny kinova 3.3
Ny Xiaomi Mi Band 4 NFC dia hamela ny fandoavam-bola amin'ny finday any Eropa